Kismaayo News » Suul faro kuma tirsana!: Xilkee ayuu hayaa?
Suul faro kuma tirsana!: Xilkee ayuu hayaa?
Soomaalidu waxey ku maahmaahdaa “Suul faro kama tirsana ama kama tirsana” sababtoo ah iyadoo qofka aadamiga leeyahay illaa shan farood ayaa haddana Suulku yahay mid gooni ah oo tusaale ahaan haddii suulka wax kaaga dhacaan waxaad oreyneysaa “Suulkaa wax igaga dhacay” mana oraneysid Far ayaa wax igaga dhacay.! Haddaba maanta Soomaaliya waxey leedahay RW la magacaabay isla markaana golaha baarlamaanku ku ansixiyey cod buuxa oo aysan jirin qof ka codeeyey. Waxaase muuqata in madaxweynaha Soomaalida mudane Xasan uu u xuubsiibtey inuu RW ka dhigto ulana dhaqmo si ka baxsan sharciga dalka u yaalla oo ah in isagu isku darsado shaqooyinkii wasiirka 1aad iyo middii madaxweynahaba.
Tan iyo intii lasoo doortey dawladdan ee ay yeelatay RW kulanwalba oo Muhiim ah waxaa gala ama qaabila madaxweynaha isagoo RW uu ama goobjoog yahay ama uusan ka warheynin waxa dhacaya iyo cidda imaaneysa waddanka.
Dastuurka waddanka u yaalla ee dawladdani ku shaqeyso awoodda badan waxaa iska leh RW dalka dhamaan shaqado fulinta waxaa iska leh RW haddana ma muuqato inuu qabanayo. Madaxweynaha dalku shaqadiisu way yartahay sida ku xusan dastuurka dalka u yaalla.
KismaayoNews waxey aaminsatahay in khilaaf culus oo waliba mid sharci ah uu ka dhexdhici madaxweynaha iyo RW dalka maaddaama oo madaxweynuhu kutumanayo sharciga waddanka u yaalla. Laga soo bilaabo xiligii lasameeyey dawladda waxaa soo badanayay in Kooxda ku xeeran madaxweynuhu ay qabanayso ama qorsheyneyso arimaha dawladda oo xitaa aysan wasiiradu waxbadan qabaneynin.
Bishii ugu danbeysey xarunta Villa Soomaaliya waxaa kasocda xulashada dhameystirka dawladda qaybaheeda dhiman waxaana gacanta ku haya madaxweynaha iyo kooxdiisa iyadoo ay jirto xan badan oo kusaabsan in madaxweynuhu uu soo xushey Wasiirada 10ka ah. Su aasha ayaa ah RW miyaa loo baahan yahayba?
Iyadoo waxaas oo hadal iyo xan ahba jirtey ayaa haddana arinta sii murgiyay socdaalada madaxweynahu qorsheeyey ee ah in isaga iyo wasiirka gaashaandhiggu aadaan socdaal meesha wasiirada arimaha dibaddana ay dhinac aadday iyagoo lagu wado iney Kenya isugu yimaaddaan. Raisul Wasaraha shaqadiisu waa maxay haddaba? Wasiirka gaashaandhiggase shaqadiisu maxey tahay?
Safarkii uu madaxweynuhu kaga baxay waddanka saacado ka hor waxuu qabtey shir uu kaga hadley Isbaarooyinka Xamar yaalla iyo ciidamada ku lug leh in sharciga la keeno,. Hagaag! Balse wasiirkii shaqadaas qaban lahaa dhanka ciidanka horey ayaan u qaadan, RW hasii joogo saw ma mooddid Suul Fara ku tirsana.
Siyaasado isdabargoynaya ayaa madaxtooyada kasoo baxaya waxaana haboon in madaxweynaha iyo kuwa ku xeerani ay illaaliyaan sharciga waddanka u yaalla. Haddii madaxweynuhu sharciga dhawri waayo, Cidna yuusan eedin kuna eedeynin haddey sharciga ka dulboodaan.
Xafiiska RW kuwa shaqeeya ayaa yaabban oo aan illaa iyo hadda garaneynin shaqada ay hayaan balse muddo intee dhan ayay sugi karaan. Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa isaguna u muuqda mid ka agdhaw siyaasadda madaxweynaha taasoo Raisul wasaaraha ka dhigaysa mid aan meesha awood badan ku lahayn.
Wasiirada 10ka ahi intooda badan waxay daacad u yihiin mana ahan mid cusub in khilaaf soo dhexgalo labada ugu sareysa dawladda. Lama oran karo waa Kaligiis talis madaxweynuhu balse haddii ay sidan ku socoto waxaa la oran karaa oo aan shaki ku jirin “KOOX KU TALIS” aysan wasiirada iyo RW ku jirin.
Doorka RW waa SUUL FARA KUMA TIRSANA